Fotoana famakiana: 3 minitra Afrika Atsimo dia tany be fientanentanana, fahasamihafana, ary manan-karena ara-kolontsaina heviny. Tombanana ho akaiky 17 mpitsidika tapitrisa nankany Afrika Atsimo tamin'ny taon-dasa fotsiny, ary izany no maro izay dia mety tena mitombo amin'ity taona ity. Toerana mahafinaritra…
Fotoana famakiana: 3 minitra Nandritra ny lasa 10 taona, an-tapitrisany efa nokasaiko ny fomba mahasoa dia ny handray ny fiaran-dalamby! Rich saha ny maitso, morontsiraka mamiratra, ary ny haran-dranomasina madio dia tsy voatonona mihitsy amin'ny brochure na bilaogy momba ny dia. Mahafinaritra ny mandeha lamasinina, mety, ary ny fomba mora-kitapom-bola mankany…
Fotoana famakiana: 4 minitra Nandeha foana na aiza na aiza no mahagaga, ary manao izany isika mba hahitana tsara tarehy tanàna, ny tantaran'ny firenena iray na kolontsaina tena mitovy amin'ny antsika. Na izany aza, tsy maintsy mandeha lavitra an-trano mba hahita toerana tsara tarehy. Misy fitsangatsanganana fiaran-dalamby eropeana vitsivitsy…
Fotoana famakiana: 6 minitra Ny iray amin'ireo zavatra tsara indrindra momba ny Italia ho toy ny vakansy toerana dia fa tsy zavatra fotsiny ny siny rangotra, ratra kely eny list. Afaka niverina tany Italia indray ary indray, ary mbola tsy ampy ny amin'io tany sy ny matsiro manjo, na…
Fotoana famakiana: 4 minitra Miaraka maro mombamomba avo, besinimaro firenena tahaka an'i Frantsa, Alemaina, ary Soisa, Tsy mahagaga raha Aotrisy tsy mbola mahazo betsaka ny saina! Ok, Italia tena lavo na oviana na oviana intsony ny sari-tany, fa ny fiaran-dalamby lalana avy any Aotrisy ho any Italia antoka dia tsinontsinona. fa, efa ho…